टच अफ गड, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
कसैले पनि मलाई touched बर्षसम्म छोएन। कोही पनि छैन। कुनै मानव आत्मा। मेरो श्रीमती होइन। मेरो बच्चा होईन। मेरो साथी होईन। मलाई कसैले पनि छोएन। तिनीहरूले मलाई देखे। तिनीहरूले मसँग बोले, म तिनीहरूको आवाजमा माया महसुस गर्थें। मैले उनको आँखामा चिन्ता देखा। तर मैले उनको स्पर्श महसुस गरेन। तपाईलाई के सामान्य छ भनेर मैले सोधें। एक ह्यान्डशेक। न्यानो अug्गालो मेरो ध्यान आकर्षित गर्न काँधमा एउटा प्याट। ओठमा चुम्बन मेरो संसारमा यस भन्दा बढी कुनै पलहरू थिएनन्। कोही म भित्र पसेनन्। यदि कसैले मेरो खिल्ली उडाएको भए मैले के दिने थिएँ, यदि मेरो काँधमा अर्कोले हिर्काएको भए, भीडमा मैले कडा प्रगति गर्न नसक्ने भए। तर यो पाँच पछि भएको थिएन। यो अन्यथा कसरी हुन सक्छ? मलाई सडकमा अनुमति थिएन। रब्बीहरू पनि मबाट टाढा थिए। मलाई सभाघरमा भर्ना गरिएको छैन। मेरो आफ्नै घरमा पनि स्वागत थिएन।
एक वर्ष, बाली काट्ने बेलामा मेरो विचारमा यो थियो कि मेरो अर्को शक्तिले ती बिरुवा समात्न सक्दिन। मेरो औंलाहरु सुन्न लाग्यो। एक छोटो समय मा म अझै पनि दाँत समात्न सक्छ, तर शायद नै यो महसुस गर्न सक्छ। मुख्य अपरेटिंग घण्टाको अन्त्यमा, मैले अबदेखि केहि महसुस गरिन। हँसिया समातेको हात पनि अरु कसैको हुन सक्थ्यो - मलाई कुनै भावना थिएन। मैले मेरी श्रीमतीलाई केहि भनेको छैनँ, तर मलाई थाहा छ उनीलाई श suspected्का लागेको छ। यो कसरी हुन सक्छ अन्यथा? मैले मेरो हातले मेरो घाउमा घिस्याएको चरा जस्तै प्रत्येक पल्ट दबाएर राखें। एक दिउँसो मैले पानीको पोखरीमा आफ्ना हातहरू डुबाएँ किनभने म आफ्नो अनुहार धुने चाहन्थें। पानी रातो भयो। मेरो औंला रगत बगिरहेको थियो, एकदम हिंस्रक रूपमा। मलाई थाहा थिएन मलाई चोट पुगेको छ। मैले आफूलाई कसरी काटे? एक चक्कु मा? के मेरो हात धारो धातु ब्लेडमा थियो? सम्भवतः, तर मैले केहि महसुस गरिन। यो तपाइँको लुगामा पनि छ, मेरी श्रीमतीले फुसफुस्यो। उनी मेरो पछाडि थिए। उनलाई हेर्नु अघि, मैले मेरो पोशाकमा रगतमा रातो दागहरू देख्यो। म पूलमा लामो समय सम्म मेरो हातमा घुम्दै थिएँ। कुनै प्रकारले मलाई थाहा थियो कि मेरो जीवन सदाको लागि बदलियो। के म तिमीसँग पादरीकहाँ जान सक्छु? ”उनले सोधिन्। होइन, मैले sighed। म एक्लै जान्छु। म फर्कें र उनको आँखामा आँसु देख्यो। हाम्रो तीन वर्षीया छोरी उनको छेउमा उभिएको थियो। म क्रौंच, उनको अनुहार तिर हेरी र चुपचाप उनको गाला स्ट्रोक। म के भन्न सक्छु? म त्यहाँ उभिएँ र मेरी श्रीमतीलाई फेरि हेरे। उनले मेरो काँध छोई र मेरो स्वस्थ हातले मैले उनलाई छोएँ। यो हाम्रो अन्तिम स्पर्श हुनेछ।
पुजारीले मलाई छोएनन्। उसले मेरो हातमा हेरी, जुन अब र्यागमा लपेटिएको थियो। उसले मेरो अनुहारमा हेरे, जुन अहिले पीडाले अन्धकार थियो। उसले मलाई के भन्यो भनेर म रिसाएन। उसले केवल उनका निर्देशनहरू पालना गरेको थियो। उनले आफ्नो मुख छोपे, उनको हात समात्दै, ताडको अगाडी। तिमी अशुद्ध छौ, उसले मलाई भन्यो। यो एकल कथनको साथ, मैले मेरो परिवार, मेरो फार्म, मेरो भविष्य, मेरा साथीहरू गुमाएँ। मेरी श्रीमती मसँग रोटी र सिक्काको झोला लिएर शहरको फाटकमा म कहाँ आए। उनले केहि भनेकी थिइनन्। केही साथीहरू भेला भएका थिए। उनको आँखामा मैले पहिलोपटक जे देखेको थिएँ त्यस बेलादेखि सबै आँखामा देखेको थिएँ: डरलाग्दो दया। जब मैले एउटा कदम चालेँ, तिनीहरू फर्किए। मेरो रोगको उनीहरूको त्रास मेरो हृदयको लागि उनीहरूको चिन्ताभन्दा बढी थियो - त्यसैले उनीहरूले राजीनामा गरे, मैले पछि देखेका अरूहरू जस्तो। मलाई हेर्नेहरूलाई म कत्ति तिरस्कार गर्छु। पाँच वर्षको कुष्ठरोगले मेरा हातहरू विकृत पारेको थियो। औंलापट्टिहरू हराइरहेका थिए र कान र मेरो नाकका केही अंशहरू। जब मैले तिनीहरूलाई देखेँ, बुबाहरू आफ्ना बच्चाहरूको लागि पुगे। आमाहरू उनको अनुहार ढाकिए। बच्चाहरूले मलाई औंला देखाए र मलाई हेरे। मेरो शरीरमाको चीरहरूले मेरो घाउहरू लुकाउन सकेन। र मेरो अनुहारको स्कार्फले मेरो आँखामा रिस पनि लुकाउन सकेन। मैले यसलाई लुकाउन पनि कोशिश गरिन। कति रात मैले मेरो लpp्गडो मुट्ठी खाली मौन आकाशको विरुद्धमा चलाएँ? यसको योग्य हुन मैले के गरेको छु? तर जवाफ कहिले आएन। कसैलाई लाग्छ मैले पाप गरें। अरूले सोच्दछन् कि मेरा बुबाआमाले पाप गर्नुभयो। मलाई मात्र थाहा छ मसँग कलिलोमा निदाएको, नराम्रो गन्धबाट सबै थोक थियो। मसँग मेरो उपस्थितिबारे चेतावनी दिन मैले श्राप घण्टी लगाएको थिएँ जसले मेरो घाँटीमा लगाएको थियो। मानौं मलाई यसको आवश्यक छ। एक हेराइ पर्याप्त थियो र कलहरू सुरु भयो: अशुद्ध! अशुद्ध! अशुद्ध!
केही हप्ता पहिले म गाउँको साथ सडकमा हिंड्न हिम्मत गरे। मेरो गाउँमा पस्न मनसाय थिएन। मँ मेरा फिल्डहरुमा अर्को हेराई हेर्न चाहान्छु। टाढाबाट मेरो घर फेरि हेर्नुहोस्। र हुनसक्छ गल्तिले मेरी श्रीमतीको अनुहार हेर्नुहोस्। मैले उनलाई देखिन। तर मैले केटाहरू मैदानमा खेलिरहेको देखें। मैले रूखको पछाडि लुकाए र तिनीहरूलाई हर्लिएको र चारैतिर उफ्रिदै गरेको देखें। तिनीहरूका अनुहारहरू यति खुशी थिए कि उनीहरूको हाँसो यति संक्रामक छ कि म एकछिनको लागि पनि कुष्ठरोगी भएन, एक क्षण मात्र। म किसान थिए। म बुबा थिएँ। म एक मान्छे थिए। तिनीहरूको खुशी संग संक्रमित, म रूख पछाडिबाट बाहिर कदम, मेरो पीठ फैलाए, एक गहिरो सास लिए ... र तिनीहरूले मलाई देखे। मैले अवकाश पाउनु अघि उनीहरूले मलाई देखे। तिनीहरू कराए अनि भागे। यद्यपि, एक अन्य भन्दा पछाडि लाग्यो। एक रोके र मेरो दिशामा हेरी। म निश्चित रूपमा भन्न सक्दिन, तर मलाई लाग्छ, हो, मलाई लाग्छ यो मेरी छोरी थियो। मलाई लाग्छ ऊ आफ्नो बुवालाई खोजिरहेकी थिई।
त्यो दृश्यले आज मैले लिएको कदम चाले। पक्कै पनि यो लापरवाह थियो। अवश्य पनि यो जोखिमपूर्ण थियो। तर मैले के गुमाउनुपर्‍यो? ऊ आफूलाई परमेश्वरको छोरा भन्छ। उसले या त मेरो गुनासो सुन्नेछ र मलाई मार्नेछ, वा उसले मेरो अनुरोध सुन्छ र मलाई निको पार्छ। त्यो मेरो विचार थियो। म एक चुनौतीपूर्ण मान्छे को रूप मा उनको लागी। यो विश्वास थिएन कि मलाई उत्प्रेरित, तर निराश क्रोध। भगवानले मेरो शरीरमा यो दु: ख सृष्टि गर्नुभयो र उसले यसलाई निको पार्छ वा मेरो जीवन अन्त्य गर्दछ।
तर मैले उनलाई देखें र जब मैले उनलाई देखेँ भने म परिवर्तन भएँ। म केवल यो भन्न सक्छु कि यहूदियाको बिहान कहिलेकाहीं एकदम ताजा हुन्छ र सूर्योदय यति गौरवशाली हुन्छ कि तपाईं विगत दिनको तातो र विगतको पीडाको बारेमा पनि सोच्नुहुन्न। जब मैले उनको अनुहार हेरे, यो यहूदियाको बिहानी जस्तो देखिन्थ्यो। ऊ केहि बोल्नु भन्दा पहिले मलाई थाहा थियो ऊ मसँग थियो। कुनै प्रकारले मलाई थाहा थियो कि ऊ रोगलाई म भन्दा बढी घृणा गर्दछ - होइन, मैले भन्दा बढी। मेरो रीस भरोसामा परिणत भयो, मेरो रीस आशामा परिणत भयो।
चट्टानको पछाडिपट्टि लुकिराखेको, मैले उसलाई पहाडबाट ओर्लिरहेको देखें। एउटा ठूलो भीड उहाँको पछि लाग्यो। म उहाँबाट केही कदम टाढा नभएसम्म म कुर्दै थिएँ, त्यसपछि म बाहिर गएँ। मास्टर! उनले रोके र मेरो दिशामा हेरे, असंख्य अरूले गरे। भीड भयभीत भएको थियो। सबैले उनको अनुहार उनको पाखुराले छोपी। बच्चाहरूले आफ्ना बाबुआमाको पछाडि कभर गरे। "अशुद्ध!" कसैले चिच्याए। म तिनीहरूसँग क्रोधित हुन सक्दिन। म हिँडिरहेको मृत्यु थियो। तर मैले उनलाई कतै सुनेको थिएँ। मैले उनलाई मुश्किलले देखेको थिएँ। मैले उनको त्रासलाई एक हजार पटक देखेको थिएँ। यद्यपि मैले उनको अनुकम्पा देखेको छैन। सबैले उहाँ बाहेक राजीनामा गरे। ऊ मकहाँ आयो। म सारिन
मैले भर्खर भनेँ: प्रभु, यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। यदि उसले मलाई एक शब्दमा निको पार्छ भने म मँ रोमाञ्चित हुने थिएँ। तर ऊ मसँग कुरा गरिरहेको थिएन। त्यो उनको लागि पर्याप्त थिएन। उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो। उसले मलाई छोयो। "म चाहन्छु!" उनका शब्दहरू उनको स्पर्शको जस्तै मायालु थिए। स्वस्थ हुनुहोस्! मेरो शरीरमा पानी सुख्खा जग्गाबाट बग्यो। त्यो क्षणमा मलाई न्यानोपन लागेको थियो जहाँ सुन्न नसकिने अवस्था थियो। मैले मेरो emaciated शरीरमा शक्ति महसुस गरे। मैले मेरो पिठि बढाए र मेरो टाउको उठाए। अब मैले उसलाई हेरिरहेको थिएँ, उनको अनुहार हेरिरहेको थिए, आँखा हेरि। ऊ मुस्कुरायो। उसले मेरो टाउको आफ्नो हातले समात्छ र मलाई यति नजिक ल्यायो कि म उसको न्यानो सास फेर्न र उसको आँखामा आँसु देख्न सक्छु। यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं कसैलाई केही नभन्नुहोस्, तर पूजाहारीलाई भेट्नुहोस्, उसलाई निको पार्ने कुरा दिनुहोस् र मोशाले आज्ञा गरेको बलिदान देऊ। जिम्मेवारहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ कि मैले कानूनलाई गम्भीरतासाथ लिन्छु। म अब पुजारी बन्ने बाटोमा छु। म उसलाई आफैँ देखाउनेछु र उसलाई अug्गालो। म आफ्नी श्रीमतीलाई देखाउँछु र उनलाई अ h्गालो हाल्छु। म मेरो छोरीलाई काखमा लिन्छु। र मलाई छुने हिम्मत गर्ने मानिसलाई म कहिल्यै बिर्सिने छैन। एक शब्दमा उसले मलाई निको पार्न सक्थ्यो। तर ऊ मलाई निको पार्न चाहँदैन थियो। ऊ मेरो सम्मान गर्न चाहन्छ, मलाई मूल्य दिन चाहन्छ, मलाई उहाँसँग मिल्छ। कल्पना गर्नुहोस् कुनै मानिस छुन लायक छैन, तर परमेश्वरको स्पर्श को योग्य छ।
अधिकतम लुकाडो (जब भगवानले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ!)